Deg Deg:-Maleeshiyaadkii Isaaq oo kala shakiyay iyo Nuux Taani oo iscasilad Gudbiyay – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:-Maleeshiyaadkii Isaaq oo kala shakiyay iyo Nuux Taani oo iscasilad Gudbiyay
DEGDEG: ilo wareedyo xog,ogaal ah ayaa Sheegaya in Nuux Taani Muuse Biixi U gudbiyay Warqadii Is casilaada balse aanu Wali ka Aqbalin
warqada iscasilaad Ee uu gudbiyay ayaa Salka Ku haysa Maadaama ciidanka snm Si Aan La Qiyaasi Karin u kala Shakiyay lagana yaabo in ay dhexdooda ka Qaraxdo
Taani ayaa sheegay in aanu rabin magac xumo iyo Taariikh xumo intaa ka Badan Isla markaa à uu Rabo in uu shaqada ciidanka Farah ka Qaado
Previous Post: Deg Deg:-Imaaraadka oo Lacag Badan Kala Baxay Bankiga Somalia
Next Post: Deg Deg:-Xiisad Ka taagan Buuhoodle
Bal noo wad sheekada adeer. Ma niic,baryo, sheeko ayaad weli wadaa? Adeer baryada iyo waano ku sheega hooyo iyo habraha kale ee Iidoor us heeg. Reer Buuhoodle uma baahnee!
Hadii aad Farmaajo hub ka soo qaadateen oo aad ciidamo ka soo wadateen Majeerteeniya dabeetana aad ku soo duusheen nabadda iyo xiasiloonida Buuhoodle, anaguna hadii aanu nahay Somaliland waanu idinla qaadanay, mar hadii aad nabadii fogayseen oo aad waliba dalka iyo deegaanka soo galiseen hubkii iyo askartii Soomaaliya ee hadhoow marka la idinku leego yaan la caban oo aan lagu barooran anaga oo shaddcab ah ayuu ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland na xasuuqay ee hada ayaad dhowdihiin ee calanka cad taaga oo dalka ka saar cadowga iyo hubka aad soo galiseen.
Guul iyo War Farxad u Leh Shacabka Soomaalilan.
—————————————————————————-Golaha Guurida (Senate) ee dawladda Marayka ayaa ansixisay in ay jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya uula kala macaamisho laba dal oo kala duwan. Hadaba imika ayuu jamhuuriyadda Somaliland u bilaabmaysaa, horumarkii iyo qaranimadii la soo waday 31 sannadood sida dhaqaalaynta iyo horumarinta ciidamada kala duwan ee dalka, tabaridda iyo xirfad baridda dhalinyarada rag iyo dumrba isugu jirta ee Somaliland iyo is aqoonsigii labada dawladoodba. Xigasho Adeer boqor Xasan Maa.
Waa la hubaa warkaas, beel walba ciidankeedu maleeshiyada beesha ayay aaday. Col Muse Biixi Qudhiisu Geedeeble ayauu xoogaa maleeshiyaad beeshiisa ah ku urursaday oo xalay halkas buu u hoyday
Qof Wax Badan Og
Aniguna waxaan moodayay in ay nac-nacdii ka daaleen oo ay yara caqliyeesteen laakiin Khaatumo iyo inta qorta toona, siii uu sheegay macalin Gaariye, guga u kordhaa, sida geedka, da’a mooyaane, sidaad uuma kordhiyo. Su’aal: Maxaad kala socotaan xidhiidhka Maraykanka iyo Jamhuuriyadda Somaliland. Maxaad kala socotaan, saldhigga Berbrea ee Maraykanka mise idhala’aantii dhega-la’aan baad ku darsateen, dhegaha iyo aragaba beelee, Aamiin.
beryahaa was la waayey ma waxoogaagi uu farmaajo u soo tuuri jirey Iney cuqdada KU fidiyaan ayaa meesha ka baxdey.
Hadii aad doonaysid inaad riyooto bal horta sariir tag oo buste hoosta ka gal. Kolka riyo Macaan helaysaa
Beernaaale,yaa kuugu yidhi warkaa xaggee ka keentey, inangumeed Baad taheye,cuqdada iska dawee dhaqtar u tag